यौनसम्पर्क किन पीडादायी हुन्छ ? योनि संकुचन भनेको के हो ?
निशान न्युज मंसिर ११, 2076
काठमाडौँ । यौनसम्पर्क पीडादायी वा असहज हुँदा कहिलेकाहीँ यौनक्रिया नै असम्भव हुन्छ । पीडादायी यौनकार्य बढीजसो हुने यौनिक समस्या हो । पीडादायी यौनसम्पर्कका कारण पुरुष वा महिला दुवै हुन सक्छन् । पुरुषमा लिंग उत्तेजित नहुने, शीघ्र स्खलन हुने, लिंगमा जन्मजात खराबी एवं यौनक्रियाबारे जानकारीको अभावले यस्तो हुन्छ भने महिलामा पीडा भएको ठाउँअनुसार सतही अर्थात् योनिद्वारमा, योनिमार्गमा वा भित्री भागमा समस्या हुन सक्छ ।
सतही अर्थात् योनि ढाक्ने भित्री तह (लेबिया माइनोरा) को तल्लो भाग वा योनिद्वार एवं मलद्वारबीच समस्या भयो भने यौनसम्पर्क पीडादायी हुन सक्छ। त्यसै गरी, योनिद्वार साँघुरो, योनिद्वार ढाक्ने झिल्ली (हाइमेन) बाक्लो, बार्थोलिन ग्रन्थि बढ्दा, भल्भाको संक्रमण, मूत्रनलीमा खराबी हुँदा यौनक्रीडाका क्रममा वा पछि पीडा हुने समस्या हुन सक्छ । योनिमार्गको सुन्निँदा, योनिमार्गमा असामान्य झिल्ली पलाउँदा, योनिमार्गको शल्यक्रिया वा सुत्केरीपश्चात् संवेदनशील खत, ट्युमरले गर्दा वा रजनोवृत्तिपछि योनिमार्गको सुक्खापनका कारण पनि यौनसम्पर्क पीडादायी हुन सक्छ ।
पीडित महिलाले पुरुष लिंग योनिमार्ग भित्र छिर्दा पीडा महसुस गर्छिन् । योनिद्वारको चारैतिर वा अन्य स्त्री जननेन्द्रिय समस्याका कारण पीडा महसुस हुन सक्छ । इन्डोमेट्रिओसिस, जीर्ण खालको पाठेघरको मुखको सुन्नाइ, जीर्ण खालको तल्लो पेटको स्त्री जननेन्द्रियको सुन्नाइ, डिम्बाशय झर्ने समस्या यौनसम्पर्क पीडादायी हुनाका भित्री कारण हुन् ।
भल्भा वा योनिमार्गको संक्रमण भएमा यथोचित उपचार गर्नुपर्छ। दम्पतीलाई यौन शिक्षाबारे जानकारी हुनुपर्छ । योनिद्वार वा योनिमार्गका पुराना खत संवेदनशील छ भने यसलाई हटाउने शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । पाठेघर उल्टो फर्किएको वा डिम्बाशय झर्ने समस्या छ भने उपयुक्त शल्यक्रिया गर्नुपर्छ ।
के हो योनि संकुचन ?
यौनसम्पर्क स्थापित गर्न लाग्दा योनिमार्गको अधिक संवेदनशीलताले गर्दा योनिको पीडादायी संकुचन हुन सक्छ । किशोरी वा युवतीले आफ्नो चाहनाबेगर नै भित्री तिघ्रा तथा पुट्ठा भित्रका मांसपेशी एकाएक संकुचनमा गई यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।
योनि संकुचन हुनाको प्राथमिक प्रकारमा कुनै रोग वा समस्या विशेष हुँदैन । यौन सम्बन्धित मनोगत समस्याले गर्दा प्रायः यौन सम्बन्ध राख्न डराउने महिलामा यस्तो समस्या उब्जिन्छ । योनिमार्ग वरिपरिको भल्भाको सुन्नाइ, योनिद्वार ढाक्ने झिल्लीको चोट, योनिद्वारमा रहेको पीडादायी खत, साँघुरो योनिद्वार एवं मार्गका कारणले योनि संकुचित हुन सक्छ। यो अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ र कारक तत्त्वको उचित उपचार गर्नेबित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ ।
दोस्रो प्रकृतिको समस्या निदान गर्न गाह्रो नभए पनि पहिलो प्रकारको समस्या पत्ता लगाउन गाह्रो हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ पीडित महिलालाई बेहोश बनाई जाँच्नुपर्ने हुन सक्छ । सामान्यतः चोर औँला र माझी औँला गरी दुइटा औँला छिराउन सकिन्छ भने योनिमार्गको आकार यथेष्ट छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
प्रथम प्रकारको योनि संकुचनको समस्याको लागि दम्पतीलाई यौन शिक्षा दिने, तिनीहरूको आत्मविश्वास जगाउने, मनोचिकित्सा सेवा दिने, औँला वा डाइलेटरको मद्दतले योनिद्वार ठूलो पार्ने कसरत सिकाउने, आवश्यकताअनुसार योनिद्वार ढाक्ने झिल्ली मिलाउने हाइमेनोप्लास्टी वा योनिमार्ग ठूलो पार्ने फेन्टोन नामको भजाइनोप्लास्टी शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ । योनिमार्ग चिप्लो पार्ने ल्युब्रिकेन्टयुक्त जेलले पनि सघाउ पुर्‍याउन सक्छ । दोस्रो प्रकारको अर्थात् कारणयुक्त योनि संकुचनको समस्याको कारक तत्त्व औषधि वा शल्यक्रियाबाट हटाउन वा निराकरण गर्न सकिन्छ ।
व्यक्तिपिच्छे शारीरिक बनावटको फरकपनजस्तै प्रत्येक व्यक्तिको लिंग तथा योनिको नाप र आकार भिन्न हुन सक्छ । तन्किने एवं खुम्चिने क्षमता भएको मांसपेशीबाट बनेको योनिमार्गका भित्ता सामान्य अवस्थामा एकअर्कामा टाँसिएका हुन्छन् । यौन उत्तेजनासँगै हल्का खुल्ने भए पनि यौनसम्पर्कका क्रममा जतिसुकै ठूलो वा सानो आकारको पुरुष लिंग ग्रहण गर्ने क्षमता हुन्छ । योनिमार्गको यही क्षमताले सुत्केरी बेलामा पुरुष लिंगको तुलनामा निकै ठूलो गर्भे शिशु सजिलै जन्मिन्छ । गर्भवती अवस्थामा योनिमार्गमा आएको परिवर्तन गर्भपूर्वको अवस्थामा फर्किन चारदेखि छ हप्तासम्म लाग्न सक्छ ।
योनिमार्गको तन्किने÷खुम्चिने क्षमताको ज्ञान नहुनु, पुरुष लिंगको आकारको गलत विश्लेषण गर्नु, यौनसम्पर्क सम्बन्धित उचित ज्ञानको अभाव हुनु, अनुभवी व्यक्तिबाट शारीरिक सम्पर्कका दौरान हुन सक्ने पीडाको बढाइचढाइले गर्दा योनि संकुचनको समस्या आउन सक्छ । त्यसै गरी, कुमारीत्व, पहिलो यौनसम्पर्कको बेलाको रक्तस्राव, कसिलो योनिमार्ग, पीडादायी यौनसम्पर्कको विगतको अनुभव वा अस्वाभाविक आँकलन पनि यसका कारण हुन सक्छन् ।
यौन उत्तेजना, यौन उत्तेजना निरन्तरता, चरम सुख र उत्तेजनापूर्वको अवस्थामा फर्किने क्रिया गरी यौनसम्पर्कका विभिन्न चरण छन् । त्यसमध्ये प्राक्क्रीडाको आफ्नै महत्त्व छ । योनिबाहिर पनि यौन संवेदनशील क्षेत्र हुन्छन्। प्राक्क्रीडाका बेला यौन उत्तेजना हुँदा उत्पादन हुने पर्याप्त मात्राको योनिरसले गर्दा पुरुष लिंग प्रवेशलाई सजिलो बनाइदिन्छ । प्राक्क्रीडा एवं यौनक्रियामा विभिन्न आसन परिवर्तनले योनि संकुचन घटाउन मद्दत गर्छ ।
यौनसम्पर्कअगाडि प्राक्क्रीडाका क्रममा, यौनसम्पर्कका बेला पुरुष पार्टनरले सहयोग गरेको खण्डमा धेरै हदसम्म योनि संकुचनको समस्या कम हुन्छ । यौनसम्पर्क करकाप, बलजफतीले होइन, महिला पार्टनरलाई पनि यौनसम्पर्कका लागि मानसिक एवं शारीरिक रूपमा तयार पार्न सकेमा पनि योनि संकुचनको समस्या हट्छ । आवश्यक परे मात्र शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । धेरैजसो प्रभावित किशोरी वा महिलालाई मोडल, डमी देखाएर यौनशिक्षा दिएको खण्डमा पनि धेरै हदसम्म समस्या निराकरण हुन्छ ।
हनीमुन मनाउदै गर्दा जेल पुगे यी जोडी
काठमाडौँ । विवाहपछिको हनीमुन समय हरेक जोडीका लागि विशेष हुने गर्छ । नयाँ जिन्दगीको शुरुवातको लागि...
काठमाडौँ । राजाहरू धेरै श्रीमती राख्नमा खप्पिस हुन्छन् भन्ने कुरा हाम्रै देशको इतिहास पढ्दा पनि थ...
श्रीमानले गराए पत्नीको उनका प्रेमीसँग बिहे, दाइजोमा दिए छोरा
काठमाडौँ । सिन्दुर हालेर भित्र्याएकी पत्नीलाई अर्कै पुरुषसँग विदाई गर्नुपर्ने अवस्था कसैको जीवनमा...
यस्तो पो प्रेमः जान्दाजान्दै जसले गरे एड्स लागेकी युवतीसँग विवाह
काठमाडौँ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका ३ (साविकको बसामाडी गाविस ५) की ४३ वर्षीया छक्की लामा र ४४ वर्षी...
घरमा भेटियो महिलाको शव, घाँटीमा बेरिएको थियो आठ फुट लामो अजिङ्गर
एजेन्सी । अमेरिकाको इन्डियानामा एउटा निकै आश्चर्य लाग्ने घटना भएको छ । त्यहाँ एक ३६ वर्षकी महिलाक...
यी युवतीको कमाइ एक घण्टामा १२ लाख
काठमाडौँ । एक युवतीले एक घण्टामै १२ लाख रुपैयाँ कमाउँछिन् भन्दा तपाईंलाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर, ...